Semalt: I-Web Scraping Database. I-HTML Scraper And Benefits Ebonelela Ngezoshishino
I-HTML scraper isixhobo esichaza amakhasi ewebhu e-HTML ngokulula. Siyazi ukuba uninzi lwewebhsayithi ezinkulu zibhalwa usebenzisa i-HTML. Kuthetha ukuba iphepha ngalinye esinokulibona lixwebhu oluhleliweyo. Ukusebenzisa i-HTML scraper, sinokufumana idatha ukusuka kumaphepha ahlukeneyo ewebhu kwaye siyiguqula ibe yifomati efundekayo neyokwehlayo njengeS CSV ne-JSON. Kukhuselekile ukukhankanya ukuba i-HTML scraper yenye yezona zinto zincedo kakhulu kwaye ziyamangalisa ukukhwa kwewebhu kunye nezixhobo zokucoca idatha kwi-net. Iingeniso zayo eziphambili sele zixutywe ngezantsi.
1. Ugcina ixesha lethu
Nge-HTML scraper, unokukhipha ulwazi kwiiwebhusayithi ezinamandla kalula. Awudingi naliphi na esinye isixhobo sokujongana namaphepha e-HTML njengenkqubo yonke enye yokukhipha idatha efundekayo neyobalulekileyo kuwe. Ngokungafani nezinye izicelo eziqhelekileyo zokucima idatha, i-HTML scraper ayiyi kuthatha ixesha elide. Endaweni yoko, iya kucokisa ulwazi kumakhasi asebenzayo kunye neewebhu eziphambili kwimizuzu embalwa nje. Ngokwahlukileyo, ezinye iinkonzo zokurhola zingathabatha iintsuku ezisixhenxe ukuya kwezilishumi kwaye zichithe ixesha elininzi kunye namandla.
2. Ukukhawuleza nokukhusela
Uninzi lwezicelo ze-web scraping zihamba ngaphantsi kunee-API, kwaye ezinye aziboneleli ukhuseleko kwi-intanethi.Ngokungafani nalezo zesevisi zedatha yedatha, i-HTML scraper yenza imisebenzi yayo ngesivinini esiphezulu kwaye iyakwazi ukufikelela kwii-webhsayithi ezili-10 ezili-20 kwiimitha ezili-30. Ngaphandle koko, esi sixhobo siqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo kunye nobumfihlo. Kuthetha ukuba akufanele ukhathazeke ngokukhuseleko kwedatha yakho echongiwe njengoko kungayi kubelwa ngabasebenzisi beqela lesithathu.
3. Ukugcinwa okukhulu kunye nokuchaneka
I-HTML scraper yenye yezo izixhobo zokucima idatha ukuqinisekisa ukugcinwa okukhulu nokuchaneka. Kuthetha ukuba idatha ekhishiwe ayikho iphoso kwaye ayiqukethe amagama alahlekayo. Ngombulelo, le webhsayithi yokwicala iteknoloji ayidingi ukugcinwa kwaye iqinisekisa iziphumo eziphezulu.
4. Ikunceda uhlale ukhuphiswano
Kweli hlabathi liqhutywe kwedata, kufuneka sihlale silindile njengoko ulwazi olunikezwa kumnatha luguqula yonke into yesibini. Ukuba sifuna ukuthola idatha efanelekileyo, kufuneka sisebenzise i-HTML scraper. Enyanisweni, esi sixhobo sinokukunceda ukuqaliswa kube yinyathelo elilodwa phambi kwabaqhubi babo. Nge-HTML scraper, unokuqokelela, ukulungelelanisa, ukurhweba nokuthumela ulwazi oluphezulu kwimizuzu embalwa. Ngaphezulu, le nkonzo yokuqhawula idatha isinceda sihlale sisiso kwiimveliso zentengiso kwaye sinika ulwazi malunga namaphepha ethu omncintiswano wewebhu. Iyakwazi ukukhupha idatha ebonakalayo kwaye efundekayo, ngaphandle kokuyekethisa kumgangatho. Ngaloo ndlela, i-HTML scraper yinto ekhethwa ngaphambili kwimibutho kunye namashishini kuwo wonke umhlaba.
5. Iintetho ngee-URL eziphukileyo
Ngamanye amaxesha sifumana ama-URL aphukileyo kwaye sifuna ukukhipha ulwazi lwabo. Nge-HTML scraper, kulula ukuba nabani na ukukhipha idatha kwiinkcukacha zewebhu eziphukileyo, amathala eencwadi ekhompyutheni kunye ne-XHMTL. Iqulethe izandiso ezahlukileyo ezifana neLoofah kunye neSanitize kwaye inceda ukucoca izixhumanisi eziphukileyo ngokukhawuleza. Esi sikrasi sinokukrazula idatha ngaphandle kweefayile ze-HTML kunye ne-XML kwaye inikeza idatha echanileyo ngexesha elifutshane Source .